Wershadeynta Wejiga Mug-ka-dhaqameedyada Shiinaha ee Beeraha Beer Mug iyo Warshadaha | Chuancheng
Daawadan noocyada Beer Mugs waxaa laga sameeyay dhalo qaro weyn oo tayo leh.
Qulqulka culus, dhalooyinka culus ee culus iyo gacan-qabashadu waxay u diidaan hoos u dhigida qulqulatooyin yar. Is-deji hortiisa telefishanka ama xaflad aad la gasho saaxiibbada gacanta ku haya mid ka mid ah koolladaas gacantaada ku jira.
Naqshadeynta qiiqa birta Jarmalka ee Classic-ka ah waxay qabataa biirka oo qabow iyadoo sii xoojineysa dhadhanka iyo udgoonka daloolada adag iyo harooyinka.
Si buuxda isugu dheelitiran oo leh culeys culeys leh si aad uga hortagto cabudhinta iyo daadinta, oo kujira naqshad caadi ah oo ay fududahay in la qabto oo adkeysi ku filan qaboojiyaha - mastaradan waxay ka ilaalin doonaan cabitaankaaga qabow illaa iyo summaddii ugu dambeysay.
Glass Beer Weyn - Wareeg faneed casri ah oo ku saabsan faneed-dhaqameedka Jarmalka ee qaab-dhismeedka ayaa ku dari doona qaab-dhismeedka iyo qaab-qoob-ka-dhaca khibradaada khamriga; sidoo kale ku habboon kafee, shaah, iyo cabitaanno kale.
Astaamaha - Muraayadaha gaardiga ah ee 'gacanka weyn' gacantu wuxuu ka dhigaa mid raaxo leh in la qabto mooska oo lagu raaxeysto cabitaanno waqti dheer ah; awoodeeda 17.25-wiqiyadeed oo weyn ayaa kuu ogolaaneysa inaad ku raaxeyso wax badan oo ka mid ah biirka aad ugu jeceshahay hal waqti; qaybta hoose ee culus waxay ku darsataa xasillooni iyo dareen raaxo leh ismaandhaafka.
Glass Tayada Talyaani ah - Waxa lagu soo farsameeyay Talyaaniga oo ay isticmaalaan mashiinnada quraaradaha ee iyagu naftooda u huray abuurista tayo sare, madax-bilaash ah, ururin koob quraaradeed; booyado-gacmeedkaani waxay muujinayaan sagxad qurxoon oo leh kala-goynno aad u daran oo qaabab leh.
Isticmaalka Rasmiga ah iyo Kuwa Casriga ah - Stein our rooti ayaa ku habboon in la isticmaalo dhammaan munaasabadaha; haddii ay tahay munaasabad si caadi ah loo daawado ciyaarta kubada cagta ee Axada ama xafladaha casho ee fanaaniinta, daroogooyinkaani si fiican ayey ula dhaqmaan munaasabad kasta.
Tilmaamaha Daryeelka - Muraayadahayada culus ee culus waa kuwo si fudud lagu dhaqi karo oo makiinada weelka lagu maydhan karo oo aan loo adkeyn karin, maydh aan dhaawac lahayn, maydh, iyo wareegyo qallalan.
Hore: Moodhadhka Ciyaaraha ee Dhalaanka Ah
Xiga: Quraarad Beer
Dhalada Beer casriga ah
Gadhka Beer Sare ee Beer
Glass U gaar ah Beer Glass
Moodhadhka Ciyaaraha ee Dhalaanka Ah